३९ अंकले घट्यो नेप्से, चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर मूल्य दश प्रतिशतले बढ्योMain Samachar
३९ अंकले घट्यो नेप्से, चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर मूल्य दश प्रतिशतले बढ्यो
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १५:४२ प्रकाशित
काठमाडौं । शेयर बजारमा बुधबार भारी गिरावट आएकोे छ । मंगलबार ५९.७० अंकले नेप्से घटेको नेप्सेमा बुधबार थप ३९ दशमलव २३ अंकले गिरावट आएको हो ।
नेप्सेका अनुसार आज नेप्से घटेर दुई हजार चार सय १६ विन्दुमा थामिएको छ भने ६ अर्ब २५ करोड ४८ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, आज कारोबार भएका समूहमध्ये दुई समूह बाहेक अन्य सबै समूह राताम्मे भएका छन् ।
आज शेयर बजार राताम्मे भएपनि दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा भने उच्च बृद्धि भएको छ । उच्च शेयरमूल्य बृद्धि हुनेमा चन्द्रागिरी हिल्स र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन रहेका छन् । जसको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ८९ अर्ब ६९ करोड
यति एयरलाइन्समा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइ
ओली र नेपालबीचको वार्ता सकियो, वार्ताको निष्कर्ष गोप्य !
नक्कली पिसिआर प्रकरण : दुई घण्टामै घर–होटलमा रिपोर्ट पुर्‍याउथे
धरहराकाे ३ सय ३० किलोको गजुरमा ९५ तोला सुन
नक्कली पिसीआर रिपोर्ट बुझाउने १२२ यात्री विमानस्थलबाट फर्काइए
अस्ट्रेलियासहित पाँच देशमा विद्यार्थी भिसाका लागि एनओसी जारी स्थगित
ओली-नेपालबीच मेरियट हाेटलमा वार्ता
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः विद्यालय सहित भिडभाड हुने क्षेत्रहरु बैशाख मसान्तसम्म बन्द
मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा चैतेदशैँ पर्वको शुभकामना
काेराेना नियन्त्रण गर्न जारी गरेकाे सरकारी आदेशमा केके छ ?
उघ्रिँदै छ पुननिर्मित धरहराको घुम्टो (तस्बिरहरु)
शनिबारको हावाहुरीले त्रिशुली नदीको निर्माणाधीन पुल उडायो